U Gaar Ah Dumarka: Ma Doonaysaa Gabadheey In Uu Gacaliyahaagu Mar Walba Guriga Joogo, Talaabooyinkan Qaad – Allsomali.net
HomeArimaha QoyskaU Gaar Ah Dumarka: Ma Doonaysaa Gabadheey In Uu Gacaliyahaagu Mar Walba Guriga Joogo, Talaabooyinkan Qaad
11 August 2020 allsomali Arimaha Qoyska, Wararkii Ugu Dambeeyay 0
Inta Badan Sida caadada u ah Ragga Somaliyeed waxa ay jecelyihiin in ay suuqa ku qaataan wakhtigooda ugu badan marka ayna shaqo ku jirin iyaga oo aan muddo dheer gurigooda joogin.
Arintaas ayaa keenta in ay Gabadhu is waydiiso wado ay gacaliyeheeda ama Sayigeeda ugu qasabto in uu iyada la joogo guriga oo uuna suuqa ku qaadan maalmaha uu shaqada fasaxa ka yahay.
Hadaba waxa aan maanta halkan ugu soo bandhigaynaa gabadh walba oo xaas ah sidii ay gacaliyeheeda ugu qancin lahayd in uu wakhti dheer iyada guriga la joogo iskana iloobo suuqa uu wakhtiga badan joogo maalmaha uuna shaqada lahyn.
1.U Diyaari Guriga Gacaliyahaaga:
Waxa gabadheey waajib kugu ah in aad guriga u diyaariso gacaliyahaaga si uu u noqdo mid qurux badan oo nadiif ah Si uu u dareemo daganaan kuna nasan karo.
2.In Aad Isku Qurxiso Gacaliyahaaga:
Isku day in aad daryeesho quruxdaada naftaadana qurxiso si uu Ninkaagu mar walba kuu arko adiga oo ifaya taas oo ku qasbaysa in uu wakhti kula qaato waliba uu Guriga joogo wakhtiga uu fasaxa ka yahay shaqada.
3.In Aad Wakhti Siiso Gacaliyahaaga:
Marka uu Gacaliyahaagu joogo Guriga isku day in aad wakhti siiso gacaliyahaaga adiga oo muhiimad gaar ah siinaya una qabanaya wax walba oo uu doonayo ama uu jecelyahay.
4.In uu Kaa Helo Wax walba oo caajiska ka saaraya:
Si uu Ninku u jeclaado in uu Agtaada joogo oo uuna Guriga ka bixin waa in uu kaa helo wax walba oo uu ku raaxaysan karo hadii ay tahay wax la cuno ama in aad si gaar ah ugu sheekayso oo aad ka ilaaliso in uu caaji dareemo una samayso waxa uu dalbato taas oo ka dhigaysa in uu dareemo muhiimada aad siinayso.
5.In Aad Ka Fogaato Khilaafka:
Inta aad awoodo isku day in aad ka fogaato wax walba oo keenaya khilaaf idin soo dhex gala adiga iyo gacaliyahaaga sababta oo ah hadii uu khilaafkiinu bato wakhti walba waxa ay sabab u noqonaysaa in uu Guriga ka baxsado.